Progressive Voice Myanmar » ရခိုင်ပြည်တွင်း စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြခဲ့သည့်ကျောင်းသားများအား မတရားဖမ်းဆီး အရေးယူမှုများ အပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာချက်
Statement 309 Views
ရခိုင်ပြည်တွင်း စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြခဲ့သည့်ကျောင်းသားများအား မတရားဖမ်းဆီး အရေးယူမှုများ အပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာချက်
October 4th, 2020 • Author: 77 Civil Society Organizations •2minute read
၄ ရက်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၂၀။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှ စတင်၍ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွါးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါဒေသများတွင် ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့အထိ စစ်ရေးနှင့်ဆက်နွယ်ပြီး အရပ်သားသေဆုံးမှု ၂၉၂ ဦးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု ၆၅၄ ဦးထိရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း RFA ၏ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များအရ သိရှိရပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွါးလျက်ရှိသည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူ ၂ သိန်းကျော်မှာ အိုးအိမ်စွန့်ခွါ တိမ်းရှောင်နေရသည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော် အနေဖြင့် အရပ်သားပြည်သူများ နေထိုင်သည့် ကျေးရွာများကို လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ အရပ်သားပြည်သူများအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်း တို့ကို ယခုကဲ့သို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်ပွါးနေသည့် အချိန်တွင်ပင် ဆက်လက်ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တစ်နှစ်ကျော်ကြာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန် တွင်လည်း 2G အင်တာနက်သာ ပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည့်အတွက် ပြည်သူများမှာ ကပ်ရောဂါကာလ အတွင်း လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကျန်းမာရေးအသိများ ရရှိနိုင်ရန်လည်း များစွာခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်သူများခံစားနေရသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများနှင့် ကြပ်တည်းမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ လက်လှမ်းမီရေးတို့အတွက် ရခိုင်ပြည် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှ ဦးဆောင်၍ စက်တင်ဘာလ ၁၀ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စစ်တွေမြို့၌ စတင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(ဗ.က.သများအဖွဲ့ချုပ်)ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောင်းသားများနှင့် သွေးစည်း ညီညွတ်ကြောင်း ပြသသည့်အနေဖြင့် ရန်ကုန်၊ မိတ္ထီလာ၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ သီပေါ၊ လွိုင်ကော်၊ ပြည် အစရှိသည့် မြို့များတွင် ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုများ၊ ပိုစတာကပ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ အသီးသီးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့် လာသည့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများကို အစိုးရက ပုဒ်မအမျိုးမျိုးတပ်ကာ ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်လာ သည်ကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။
ကျောင်းသားများကို တရားစွဲဆိုရာတွင် ငြိမ်းစုစီဥပဒေအပြင် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ (ခ) နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုလည်း အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများကို ဖမ်းဆီးရာတွင်လည်း ၄င်းတို့၏ နေအိမ်နှင့် ၄င်းတို့ရှိရာနေရာများ (တက္ကသိုလ်ပုရဝဏ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း)သို့ ရဲနှင့် အရပ်ဝတ် အင်အား အများအပြားဖြင့် ရာဇဝတ်နှိမ်နင်းရေး စီမံချက်တခုကဲ့သို့ ဝင်ရောက် စီးနှင်းဖမ်းဆီးခြင်း၊ ဖမ်းဝရမ်းမပါဘဲ အင်အားသုံးခေါ်ယူခြင်းတို့ကို တရားလက်လွတ် ပြုမူဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းအပြင် စက်တင်ဘာ(၂၅)ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ဗကသ ဗဟိုအမှုဆောင်များဖြစ်သည့် ကိုကျော်သီဟရဲကျော် နှင့် ကိုစိုးလှနိုင် တို့အား အများပြည်သူနှင့် မိသားစုအား ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရဘဲ၊ တရားခွင်စစ်ဆေးမှုများ ကို အဆင့်တိုင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့တွင် ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နှင့် (ခ) နှစ်ရပ်ပေါင်း ထောင်ဒဏ် (၂)နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် သဘာ၀ဘေး စီမံဥပဒေနှင့် ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မများအား ဆက်လက် ရင်ဆိုင်သွားရဦးမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အခြားတစ်ဖက်တွင် အာဏာရပါတီအပါအဝင် တပ်မတော်ကျောထောက်နောက်ခံ နိုင်ငံရေး ပါတီများ နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီအချို့၏ ထောက်ခံသူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး နှင့် အင်အားပြ လှုပ်ရှားမှုများကို လူအင်အားထောင်ဂဏန်းခန့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်း အစိုးရ အနေဖြင့် အရေးယူခြင်း မရှိသည့်အပြင် ထောက်ခံသူများကို အရေးယူရန် ခက်ခဲကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်ကို စိတ်ပျက်ဖွယ်တွေ့ရှိရပါသည်။
ပြည်သူလူထုအား ဒုက္ခကြီးမားစွာ ကျရောက်စေသော ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် လှုပ်ရှားခဲ့သော ကျောင်းသားများအား အစိုးရမှ ယခုကဲ့သို့ မတရား ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခြင်း၊ နေအိမ်များ၊ တက္ကသိုလ်များကို ဝင်ရောက်စီးနင်း ဖမ်းဆီးခြင်းများသည် အခြေခံလူ့ရပိုင်ခွင့်များ အား ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ မတရားဖမ်းဆီးမှုများကို မိမိတို့အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက် ရှုတ်ချလိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးထားသော ကျောင်းသားများအား ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးရန် နှင့် ၎င်းတို့အား အရေးယူထားသည့် ပုဒ်မများအား အမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းပေးပါရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ထို့ပြင် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင် နိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင် ခြွင်းချက်မရှိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာ၍ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုနည်းလမ်းများဖြင့်သာ နိုင်ငံရေးပြဿနာများ ကို ဖြေရှင်း လုပ်ဆောင်ရန်လည်း အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
မမွန်ရည်ကျော်(Nyan Lynn Thit Analytica) – 09784043478
မောင်ဆောင်းခ(အသံအဖွဲ့) – 09773937273
ကိုမိုဃ်းသွေး(Generation Wave) – 09979238220
မသဉ္ဇာရွှန်းလဲ့ရည်(ACDD) – 09795574775
၁။ အသံ – လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့
၂။ Myanmar Free Press
၃။ Synergy – လူမှုသဟဇာတဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့
၄။ Genuine People’s Servants – GPS
၅။ Nyan Lynn Thit Analytica
၆။ The Wings Institute for Reconciliation
၇။ Myanmar Cultural Research Society (MCRS)
၈။ Oway Education and Youth Institute
၉။ Action Committee for Democracy Development
၁၀။ Generation Wave
၁၁။ Myanmar People’s Alliance (Shan State)
၁၂။ Progressive Voice
၁၃။ Center for Social Integrity- CSI
၁၄။ Kanpetlet Land Development Organization
၁၅။ Uakthon Local Social Development Organization
၁၆။ Golden Heart Organization
၁၇။ Hkumzup Development Committee
၁၈။ Open Development Foundation
၂၀။ ဧရာဝတီ လူငယ် ကွန်ရက်
၂၁။ ဒို့မြေကွန်ရက်(Land In Our Hands)
၂၂။ Farmers And Land Rights Action Group
၂၃။ Shwechinthae Farmers Network
၂၄။ Waingmaw CSO Network
၂၅။ Chin Women Development Organization
၂၆။ Chin MATA Working Group
၂၇။ Chin Resources Center
၂၈။ Chinland Natural Resources Group
၂၉။ Justice Movement for Community – Innlay
၃၀။ Shan Women Development Network
၃၁။ မိတ္ထီလာခရိုင် အလင်းတန်းအဖွဲ့၊
၃၂။ ရွှေတောင်တိုက်နယ်တောင်သူ့အားမာန် ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် အဖွဲ့
၃၃။ ရွှေတြိဂံ တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့
၃၄။ Zinlum Committee (Tanphaye)
၃၅။ ရွှေမင်းသား ဖောင်ဒေးရှင်း
၃၆။ The Seagull: Human Rights, Peace & Development
၃၇။ Thuriya Sandra Environmental Watch Group
၃၈။ MATA စစ်ကိုင်းတိုင်း
၃၉။ Civil Call
၄၀။ Free & Fair Youth (Chaung Oo)
၄၁။ IFI Watch Myanmar
၄၂။ Rakha Strength Social Development Organization
၄၃။ Mro Youths Development Association
၄၄။ Women of Indigenous Network (WIN-Chin)
၄၅။ Helping Hand Organization
၄၆။ ခြေလှမ်းသစ်အဖွဲ့ (မကွေး)
၄၇။ Rakhine Youth New Generation – Network
၄၈။ Thazin- Legal Aid Group
၅၀။ Chin Land Affair Network (CLAN)
၅၁။ Mwe Taung Area Development Group
၅၂။ KRDA Kyaukphyu Rural Development Association
၅၃။ မန္တလေး လူထုနေရာ
၅၄။ Area Peace and Development Forward
၅၅။ SKY-Youth, Kyaukphyu
၅၆။ Ayeyarwaddy West Development Organization – AWDO (Magway Region)
၅၇။ Pwintphyu Development Organization.
၅၈။ Ayeyarwaddy West Development Organization – AWDO (Nagphe)
၆၀။ Democratic Education Corner
၆၁။ NNER National Network for Education Reform
၆၂။ Action Group for Farmers Affair (AGFA) (မန္တလေးတိုင်း)
၆၃။ Action Group for Farmers Affair (AGFA) (စစ်ကိုင်းတိုင်း)
၆၄။ Action Group for Farmers Affair (AGFA) (မကွေးတိုင်း)
၆၅။ Action Group for Farmers Affair (AGFA) (ဧရာဝတီတိုင်း)
၆၆။ Action Group for Farmers Affair (AGFA) (ပဲခူးတိုင်း)
၆၇။ စိမ်းရောင်စို (တံတားဦး)
၆၈။ ဝါးစိမ်းတောင်ကာကွယ်စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (WPWC)
၆၉။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ
(CCTU – Cooperating Committee of Trade Unions)
၇၀။ Olive Organization
3. All Kachin Youth Union (AKYU)
4. Kayan New Generation Youth (KNGY)
5. Kuki Students Democratic Front (KSDF)
7. Mon Youth Progressive Organization (MYPO)
8. Pa-O Youth Organization (PYO)
9. Ta’ang Students and Youth Organization (TSYO)
10. Tavoyan Youth Organization (TYO)
11. Zomi Students and Youth Organization (ZSYO)
၇၂။ Bee House
၇၃။ Community Response Group (ComReG)
၇၄။ Alin Sae Taman Library & Resource Center
၇၅။ Citizen’s Action for Transparency (CAFT)
၇၆။ Peace and Rule of Law Acceleration Network (PRLAN)
၇၇။ Future Light Center (FLC)